Otú Ị Ga-esi Aghọta Akwụkwọ Nsọ | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Kongo Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Mmadụ ò nwere ike ịghọta ihe e dere na Baịbụl?
Baịbụl bụ Okwu Chineke. Baịbụl dị ka akwụkwọ ozi nke nna hụrụ nwa ya n’anya detaara nwa ya. (2 Timoti 3:16) Na Baịbụl, Chineke kwuru ihe ndị anyị ga-eme ka obi na-atọ ya ụtọ, kwuokwa ihe mere o ji kwe ka ihe ọjọọ na-eme n’ụwa, nakwa ihe ọ ga-emere ụmụ mmadụ n’ọdịnihu. Ma ndị isi okpukpe dị iche iche na-asụgharị Baịbụl isi. Nke a emeela ka ọtụtụ ndị chee na mmadụ agaghị enwe ike ịghọta ihe e dere na Baịbụl.—Ọrụ Ndịozi 20:29, 30.
Jehova Chineke chọrọ ka anyị mata onye ọ bụ nke ọma. Ọ bụ ya mere o ji nye anyị Baịbụl nke bụ́ akwụkwọ anyị ga-aghọtali ihe e dere na ya.—Gụọ 1 Timoti 2:3, 4.
Olee otú i nwere ike isi ghọta ihe e dere na Baịbụl?
Ihe Jehova mere abụghị naanị inye anyị Baịbụl, ọ na-enyekwara anyị aka ịghọta ihe e dere na ya. O zitere Jizọs ka ọ kụziere anyị ihe. (Luk 4:16-21) Jizọs nyeere ndị ọ kụziiri ihe aka ka ha ghọta Akwụkwọ Nsọ. Jizọs kọwaara ha amaokwu dị iche iche na Baịbụl.—Gụọ Luk 24:27, 32, 45.
Jizọs malitekwara ọgbakọ Ndị Kraịst. Ihe mere o ji malite ya bụ ka Ndị Kraịst na-arụ ọrụ ahụ ọ malitere. (Matiu 28:19, 20) Taa, ezigbo ndị na-eso ụzọ Jizọs na-enyere ndị mmadụ aka ka ha ghọta ihe Baịbụl kwuru banyere Chineke. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta ihe e dere na Baịbụl, obi ga-atọ Ndịàmà Jehova ụtọ inyere gị aka.—Gụọ Ọrụ Ndịozi 8:30, 31.
Baịbụl Ihe Ndị E Ji Amụ Baịbụl
Gị na Ndịàmà Jehova kwurịta ihe Baịbụl na-akụzi ma ọ bụ gị agaa ebe anyị na-amụrụ ndị mmadụ Baịbụl n’anaghị ha ego na jw.org.